Tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii ka dhacay Muqdisho oo korortay | Horumar Online
Faah faahinta laga helay Khasaaraha ka dhashay qaraxyadan, ayaa waxa ay sheegayaan in dhimashada ay gaareyso illaa 35 ruux, halka dhaawacana uu intaasi ka badan yahay.
Isbitaalada Magaalada Muqdisho ayaa waxaa la gaarsiiyay dad kala duwan oo qaba dhaawacyo liita, kuwaasi oo xalay qaarkood ku geeriyooday Isbitaaladii la gaarsiiyay.
Maydadka dadka dhintay ayaa waxa ay kala yaalaan Isbitaalada kala ah, Madiina, Daaru Shifa iyo Isbitaalka Digfeer, halkaasi oo xalay ay tageen dad kala duwan oo ay ka maqan yihiin ehelkooda si ay uga dhex raadiyaan maydadka.
Khasaaraha ugu badan ayaa wuxuu soo gaaray dadka rayidka ah ee saarnaa basaska dadweynaha ee halkaasi maraayay iyo Mootooyinka Bajaajta ee isticmaalaayay wadada laamiga ah ee saddexda qarax ay ka dhaceen.
Al Shabaab oo sheegtay masuuliyadda qaraxyadan ayaa waxa ay sheegeen inay halkaasi ku dileen 25 ruux oo ka tirsan masuuliyiinta dowladda Federalka Somaliya.